Mwedzi wega wega, ini ndaizowana zviuru nezviuru zvevashanyi vanodzoka kuburikidza nebrowser push notices dzatinobatanidza. Nehurombo, chikuva chatakasarudza chave kuvhara saka ndaifanirwa kutsvaga chitsva. Zvakatoipisisa, hapana nzira yekuunza avo vekare kunyoresa kudzokera kunzvimbo yedu kuitira kuti titore hit. Nechikonzero ichocho, ini ndaifanirwa kusarudza chikuva chinozivikanwa uye chinotyisa. Uye ndakachiwana muOneSignal. Kwete chete
Paunoverenga aya maviri manhamba, iwe unozoshamisika. Vanopfuura makumi mashanu muzana emabhizinesi ese havana webhusaiti. Uye yeiyo DIY's (Do-It-Yourselfers) iyo inotanga kuvaka saiti, 45% yavo vanokundikana kuburitsa imwe zvachose. Izvi hazvitomboverenga huwandu hwemabhizinesi ane webhusaiti ayo asiri kungotyaira anotungamira… ayo ini ndinotenda ndeimwe akakosha muzana. Iyi infographic kubva kuWebydo inonongedza nyaya hombe nekutadza
Bizible inokutendera kuti uongorore mashandiro eAdwords ako zvichibva pakutendeuka pane kubaya, zvichikubvumidza kuti ushande wakasarudzika ne Salesforce kuyera mashandiro anoenderana nemushandirapamwe, boka revashambadziro, zvemukati zveshambadziro, uye nhanho yemazwi. Sezvo Bizible inoshanda neazvino mushandirapamwe wekutevera muGoogle Analytics, iwe unogona nyore kuteedzera akawanda-chiteshi pane kutsvaga, zvemagariro, zvakabhadharwa, email uye mamwe makwikwi. Makiyi Akakosha akanyorwa pane Bizible saiti AdWords ROI - inoita kuti iwe uboore zvakadzika paAdWords